Girls fitafiana fanaovana kajy habe amin'ny aterineto
Girls akanjo fanaovana kajy habe-tserasera
Girls fitafiana fanaovana kajy habe amin'ny aterineto dia mamela anao hahita sy hampiova finoana ankizivavy fitafiana habe ny Amerikana, Britanika, Eoropeanina, Rosiana habe, sakany tratra sy avo amin'ny santimetatra, na ankizivavy ny taona.
Girls akanjo fanaovana kajy habe-tserasera mamela anao mba hampiova finoana ankizivavy fitafiana habe ny Amerikana, Britanika, Eoropeanina, Rosiana habe, sakany tratra sy avo amin'ny santimetatra, na ankizivavy ny taona. Ohatra, niova fo ho an'ny ankizivavy akanjo habeny avy any Amerikana ho any Eoropa, avy Britanika ny Rosiana sns koa ianao dia afaka mahita ankizivavy fitafiana tabilao habeny, amin'ny lehibe sy ny kely habeny.
Age Haavo Width vata Rosiana Eoropa Anglisy (UK) Amerikana (US)
Ankizy akanjo fanaovana kajy habe-tserasera
Niova fo samy hafa ny ankizy akanjo habe ny firenena samy hafa.
Kids kiraro fanaovana kajy habe-tserasera
Niova fo ankizy kiraro habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Eoropeanina, anglisy, amerikana (USA), Japoney habe na santimetatra.
Kids ba kiraro fanaovana kajy habe-tserasera
Niova fo ba kiraro ny ankizy ho samy hafa habe firenena, toy ny Amerikana, anglisy, Eoropeanina, Rosiana habe, kiraro habe na ny tongony eto amin'ny halavan'ny santimetatra.
Clothes ny ankizivavy
Misy lehibe sy kely ny tovovavy lamba samy hafa habe tabilao ao amin'ny firenena.